လမ်းဆုံ .....: ဘာသာရေး Webpage
http://www.youtube.com/watch? ရှင်ဇ၀န တခဏတာ သရဏဂုံ
http://www.youtube.com/watch? ရွှေလင်းယုန် နှင့်မေတ္တာ သုတ်တော်များ
http://www.youtube.com/watch? မေတ္တာသုတ် အတ္ထုပ္ပတ္တိ တရားတော်
ဦးဝိစိတ္တသာရ websites ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်အပါအ၀င် အသံတော်+စာသား
ပရိတ်ကြီး ၁၁သုတ် Mp3 တစ်သုတ်ချင်း
ရှင်ဥာဏိဿရ ဓမ္မစင်္ကြာအသံတော်တွဲလျှက်website နှင့်အခြားဆရာတော်ကြီးများတရားအစုံပါပြီ
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်ပဌာန်းပါလိတော် များစာအုပ် Free download
ဓမ္မ+အိုင်တီ Free Download and Special For ရွှေလင်းယုန်
http://video.google.com/videoplay?docid=7215802796121086188 ရွှေလင်းယုန်ပရိတ်ကြီး စ-ဆုံး
http://video.yahoo.com/watch/615209/2927119 Part2 ပရိတ်ကြီး
http://uk.geocities.com/kabarmakyay/index.htm ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် ၏စာသား ပါဌိ စ-ဆုံး
http://www.mediafire.com/?ivigvxcydic မင်းကွန်းဦးဝိစိတ္တ ပရတ်ကြီး ၁၁သုတ် MP3 Download
( Webpage )
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး မူရင်းနယူးယောက်Website မေတ္တာပို့ auto ပွင့်
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးမူရင်း Website မှ ပစ္စသမုပ္ပဒ်လည်ပုံတရားAuto ပွင့်သည်
http://www.dhammaceti.org/home.htm (ဓမ္မစေတီ ဆရာတော် ဦးကောသလ္လ)
http://mettashin.com/ (အရှင်ဇ၀န)(မေတ္တာရှင်-ရွှေပြည်သာ -၁)
http://www.dhammadownload.com/ ( ဓမ္မ MP3 ဒေါင်းလုပ် )
http://burmaborn.wordpress.com/ (တပိုင်တနိုင် သာသနာပြုရအာင်)
ForwardMail ကို ပြန်တင်ပါသည်။